Mabasa aJehovha ekutendeka kuvanhu vake
Mwari anoyeuka sungano yake (8-10)
“Musabata vazodziwa vangu” (15)
Josefa akashandiswa naMwari ari muutapwa (17-22)
Zvishamiso zvaMwari muIjipiti (23-36)
Israeri anobuda muIjipiti (37-39)
Mwari anoyeuka vimbiso yaakaita kuna Abrahamu (42)
105 Ongai Jehovha,+ danai zita rake,Zivisai mabasa ake pakati pemarudzi!+ 2 Muimbirei, imbai muchimurumbidza,*Fungisisai mabasa* ake ese anoshamisa.+ 3 Zvirumbidzei pamusoro pezita rake dzvene.+ Mwoyo yevaya vari kutsvaga Jehovha ngaifare.+ 4 Tsvagai Jehovha+ uye simba rake. Tsvagai chiso chake* nguva dzese. 5 Yeukai mabasa anoshamisa aakaita,Zvishamiso zvake nemitongo yaakazivisa,+ 6 Imi vana* vemushumiri wake Abrahamu,+Imi vanakomana vaJakobho, vakasarudzwa.+ 7 Ndiye Jehovha Mwari wedu.+ Mitongo yake iri munyika yese.+ 8 Anoyeuka sungano yake nekusingaperi,+Vimbiso yaakaita* kuzvizvarwa zvine chiuru,+ 9 Sungano yaakaita naAbrahamu,+Nemhiko yaakapika kuna Isaka,+ 10 Yaakadzika semurau kuna JakobhoUye sesungano inogara nekusingaperi kuna Israeri, 11 Achiti, “Ndichakupa nyika yeKenani+Kuti ive nhaka yako yawakapiwa.”+ 12 Izvi zvakaitika pavakanga vari vashoma,+Vari vashomanana, uye vari vatorwa munyika yacho.+ 13 Vaifamba vachibva kune rumwe rudzi vachienda kune rumwe,Vachibva kune humwe umambo vachienda kune vamwe vanhu.+ 14 Haana kurega mumwe munhu achivadzvinyirira,+Asi akatsiura madzimambo nekuda kwavo,+ 15 Achiti, “Musabata vazodziwa vangu,Uye musaitira vaprofita vangu zvakaipa.”+ 16 Akaita kuti nzara ive panyika;+Akaita kuti vasawane chingwa.* 17 Akafanotuma mumwe murume mberi kwavo,Josefa, uyo akatengeswa kuti ave nhapwa.+ 18 Vakasunga* tsoka dzake nezvisungo,+Mutsipa wake wakasungwa nesimbi; 19 Kusvikira shoko rake raratidza kuti nderechokwadi,+Zvakataurwa naJehovha ndizvo zvakamunatsa. 20 Mambo akatumira shoko kuti asunungurwe,+Mutongi wemarudzi akamusunungura. 21 Akamugadza kuti ave tenzi weimba yake,Mutongi wezvinhu zvake zvese,+ 22 Kuti ave nesimba pamusoro pemachinda* ake sezvaaida*Uye kuti adzidzise vakuru vake uchenjeri.+ 23 Israeri akabva auya muIjipiti,+Uye Jakobho akagara ari mutorwa munyika yaHamu. 24 Mwari akaita kuti vanhu vake vabereke kwazvo;+Akaita kuti vave nesimba kupfuura mhandu dzavo,+ 25 Dzaakarega dzichichinja mwoyo kuti dzivenge vanhu vake,Kuti dzirongere vashumiri vake zvakaipa.+ 26 Akatuma mushumiri wake Mozisi,+Uye Aroni,+ waakanga asarudza. 27 Vakaita zviratidzo zvake pakati pavo,Zvishamiso zvake munyika yaHamu.+ 28 Akatuma rima, nyika ikasviba;+Havana kupandukira mashoko ake. 29 Akashandura mvura yavo ikava ropa,Akauraya hove dzavo.+ 30 Nyika yavo yakazara matatya,+Kunyange mudzimba dzamambo dzemukati. 31 Akarayira kuti mbuo* dziuyeUye kuti unyunyu huuye munharaunda dzavo dzese.+ 32 Akachinja mvura yavo ikava chimvuramabweUye akatuma mheni* panyika yavo.+ 33 Akarova mizambiringa yavo nemionde yavoUye akaparadza miti yemunharaunda yavo. 34 Akataura kuti mhashu dziuye,Mhashu diki dzisingaverengeki.+ 35 Dzakadya zvinomera zvese zvemunyika yacho,Uye dzakadya zvibereko zvenyika. 36 Akabva arova matangwe ese emunyika yavo,+Iko kutanga kwesimba ravo rekubereka. 37 Akabudisa vanhu vake vaine sirivha negoridhe;+Uye pamadzinza ake hapana munhu akagumburwa achifamba. 38 Ijipiti yakafara pavakabuda,Nekuti yakanga yava kuvatya.+ 39 Akatambanudza gore kuti rivavharidzire,+Nemoto kuti uvape chiedza usiku.+ 40 Vakakumbira, akaunza zvihuta;+Akaramba achivagutsa nechingwa chaibva kudenga.+ 41 Akavhura dombo, mvura ikayerera;+Yakayerera nemugwenga serwizi.+ 42 Nekuti akayeuka vimbiso tsvene yaakaita kumushumiri wake Abrahamu.+ 43 Saka akabudisa vanhu vake vachipembera nemufaro,+Vanhu vake vaakasarudza vachishevedzera nemufaro. 44 Akavapa nyika dzemamwe marudzi;+Vakagara nhaka zvinhu zvakanga zvashandirwa zvakaoma nemamwe marudzi,+ 45 Kuti vachengete mirau yake+Nekuchengeta mitemo yake. Rumbidzai Jah!*
^ Kana kuti “muridzirei rwiyo.”
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Taurai nezvemabasa.”
^ Kana kuti “Tsvagai kuva pamberi pake.”
^ Kana kuti “vazukuru.” ChiHeb., “mbeu.”
^ ChiHeb., “Shoko raakarayira.”
^ ChiHeb., “Akatyora tumiti twese twechingwa.” Zvingava zvichireva tumiti twaiisirwa chingwa.
^ ChiHeb., “Vakarwadzisa.”
^ ChiHeb., “Kuti asunge machinda.”
^ Kana kuti “sezvaidiwa nemweya wake.”
^ Kana kuti “marimi emoto.”